Fikradaha khaldan ee caadi ahaan laga helo steroids anabolic adduunka | AASraw
/blog/Gallery/Fikradaha khaldan ee sida caadiga ah looga helo steroids anabolic-ka adduunka
Posted on 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Tani waxay noqon doontaa aragti guud oo guud ujeeddooyin aqooneed oo keliya, maahan sida loo hago. Tani macnaheedu maahan inaan aqbalay isticmaalkeeda mana aha aqbalitaan.
Badanaa si khaldan loo fahmay ama loo kala soocay- waxaa jira noocyo kala duwan oo steroid ah. Corticosteroids, oo leh waxyeelooyin-xun ayaa ka xun Cudurka Anabolic, sababo jira awgood ma ahan kuwo warbaahintu sheydaan u adeegsato runtiina waa LA AQBAL KARAA kiisaska badankood - oo ay kujiraan isboorti xirfadeed iyo kulleejo. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo caabuqa. Waxa kale oo jira Progesterone oo loo isticmaalo noocyada ugu badan ee ka hortagga uurka oo ay qaataan malaayiin haween ah maalin kasta. Steroids dhiska (halkan loogu yeero AS ama AS) waa waxa dadka badankiisu ka fikiraan markay maqlaan "steroids" iyo dhammaan waxyaalaha xunxun ee la xidhiidha iyaga.
Qof kastaa wuxuu la kulmaa dhinacyo kala duwan. Labada qof isku mid ma ahan. In la dhaho dadka oo dhami waxay la kulmi doonaan wax la mid ah waa qosol. Dadka qaar waxay leeyihiin waqti aad u adag si ay u fahmaan tan sida lagu arko taxanaha lamis. Waxaa jira hal saameyn oo keliya taas oo dhammaan * ragga * adeegsadayaasha la dammaanad qaadayo- taasina waa atrophy testicular.
A) Atrophy-ga loo yaqaan 'Antiro Atrophy' - marka aad kabto tiro aad u badan Hormoonkaas HPTA jirkaaga wuxuu bilaabaa inuu xirmo (wuxuu joojiyaa soo saarida testosterone maxaa yeelay jirkaaga sifiican ayuu uga fiicnaanayaa in kabadan); Marka la soo koobo tani waxay keenaysaa in kubbadahaagu yaraadaan. Inta badan xitaa lama ogaan karo. Waxaa laga yaabaa 25% dhimis, 50% ugu badnaan. Mar alla markii aad ka baxdo wareegga wareegga, socodsiiso PCT-gaaga (Daaweynta wareegga dambe) waxay dib ugu soo noqonayaan cabbir buuxa. Ma aha mid joogto ah. Dadka qaarkiis waxay wadaan HCG (Human chorionic-gonadatropin) inta ay wareegayaan si ay kubadooda ugu xajistaan ​​cabbir buuxa waxayna sidoo kale caawisaa soo kabashada maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa unugyadaada leydig inay shaqeeyaan.
B) Xiijo / timo lumis: AS ma keento xiirid ama timo lumis. Si kastaba ha noqotee, waxay dardargelin kartaa hawsha. Haddii timo lumis ku dhacdo qoyskaaga, la yaab waxaad u badan tahay inaad u noqon doonto musharrax dardar gelinaya hawshan. Bill Roberts wuxuu qoray laba nooc oo kala duwan Steroids- Nooca I iyo Nooca II; Nooca I oo ah xeryahooda ugu waaweyn sida Testosterone, Tren, Decca, Sust, iwm iyo Nooca II oo kale ah Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron iwm. Dadka badankood waxay eedeeyaan daroogada sida Winstrol iyo Masteron Enanthate (Drostanolone) sida dambiile u ah luminta timaha iskuna day inaad ka fogaato daroogooyinkaas markaad ka walaacsan tahay MPB, marka taasi run ahaantii aysan ahayn kiiska-nooca waxaan ku yeelanayaa saameyn aad u baaxad weyn MPB (bidaarta muuqaalka ragga) marka loo eego noocyada kale ee daroogada ah. Iyo sida cad daawooyinka ku saleysan DHT (sida deca) waxay ku sii adkaan doonaan madaxaaga. Sida kaliya ee lagula dagaalami karo tan waa iyadoo la qaato Finasteride (propecia / proscar) qaar ka mid ah shaambooyada nooca rogaine ee jirka la mariyo iyo waxyaabo kale oo dhowr ah.
C) finan - dadka qaar wejigooda ayey ka soo baxaan; dadka qaar waxay ka soo baxaan xabadka ama dhabarka… dadka qaarkiisna maqaarkoodu dhabuu u kala baxaa. Mar labaad, qof walba si gaar ah ayuu u saameeyaa.
D) Waxaan dareemayaa sidaan inay ahayd in lagu daboolo atrophy xiniinyaha oo kaliya ayaan ilaaway. Marar badan waxaan maqlaa dad ka hadlaya AS oo ka dhigaya dick-kaaga inuu yaraado, markay dhab ahaantii ula jeedaan kubbadahaaga. Marka, si loo caddeeyo, dick-kaaga ma yaraado taasna waxay ka dhigeysaa macno badan sida inaad dhahdo qaadashada buufiska sanka ayaa yareynaya sankaaga. Hadday wax jiraan, iyadoo dhiig badani ku sii qulqulayo aaggaas waxaan dhihi lahaa waxaad u nuglaandoontaa ka soo horjeedka dhaca. Mar labaad waxay kuxirantahay xeryahooda aad qaadato- daroogooyinka qaar sida Deca iyo Tren waxay kugu noqon karaan kuwo aad u adag libido (hadaba weedha, "deca-dick") ragga qaarna waxay doorteen inay qaataan Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) ama viagra (uma baahnid) laakiin daroogooyinka kale sida toosinta Tijaabada (nooc kasta ha ahaadee) ama dbol waxay kugu kici doonaan inaad darbiyada fuulaysid oo aad uun u murugoon… .. Gabdhaha intooda badan ee leh nin ama saaxiibka wareegga ayaa umuuqda inuu ku raaxeysto ninkooda wareega ku socda, lol.
E) “Roid-rage” - Wax jira ma jiraan. Waa wax fudud sida in. Haddii aad tahay qof aan xasilloonayn, haa, iyagu waxay kaa dhigi doonaan intaas in ka sii xasilloon. Laakiin haddana, waxyaabo kale oo badan iyo dawooyin kale ayaa laga yaabaa inay taasi keenaan. Haddii aad maskaxiyan deggan tahay ama xitaa lagugu helay cillad maskaxeed waa inaadan waligaa ka fiirsan inaad qaadato steroids. Waxaan jeclaan lahaa in sidan oo kale loo yiraahdo khamriga. Dadka intiisa badan saameyn kuma laha tan. Dadka badankood waxay dareemaan inay ku jiraan xaalad ka fiican ama aan ka duwanayn gabi ahaanba. Waxaan arki karaa dadka laga yaabo inay sii ciil qabaan maxaa yeelay way ka yara weyn yihiin xoogaa weyna ka xoog yar yihiin, laakiin intaas marka laga tago, wax kasta oo soo sheegaya “roid-rage” (hay'ad dawladeed iyo haddii kaleba) waa fardaha.
F) Dhimasho / dhicitaan xubnaha / iwm.
Steroidsku ma keenaan dadka inay dhintaan ama u horseedaan dhimashadooda sababtoo ah falcelin xun. Ma jiraan daraasado cilmi ah oo muujinaya xiriir toos ah oo ku saabsan steroids dhiska iyo dhimashada. Dadku waxay tilmaami doonaan Zyzz, laakiin ma tilmaami doonaan taariikhdiisa qoyskiisa ee wadnaha / xaaladaha wadnaha umana maleynayo in baaritaanka meydka waligiis aan dadweynaha laga dhigin? Si aad u sheegto tirakoobka CDC ee laga soo bilaabo 2005 oo ka xoog badan:
75,000 dadku sanad ayaa u dhinta Alkohol
435,000 dadka sanad ayaa u dhinta Tubaakada
iyo dhimashada ka timaadda steroids dhiska ……: 3
Khataraha steroids-ka waa kuwo aad u buunbuun ah. Aad u barbar dhigaya xaaladda Pitbulls. Dad badan ayaa u dhinta madaxa inay ku garaacaan qumbaha ama kaliya jaranjarada.
Haa, haddii steroids loo sameeyo si khaldan waxay noqon kartaa khatar. Daawada afka laga qaato (sida dbol, winstrol, anavar, iwm) waa cagaarshow waxayna ku noqon kartaa mid aad u adag beerkaaga hadii lagu qaato qaadasho aad u badan iyo waqti aad u dheer… iyo haddii aad khamri cabto intaad wareega ku jirto. Tani waa sababta loogula taliyay in la helo baararka dhiigga ka hor, inta lagu jiro, iyo wareegga dambe. Qaadashada waxyaabaha sida yamaarugga caanaha ayaa kaa caawin kara yareynta culeyska beerkaaga.
Cadaadiska Dhiiggu kor ayuu u kici karaa oo wuu sii kici karaa, mar labaad sidaa darteed waxay kuxirantahay xeryaha aad qaadatid (qaasatan Methandrostenolone (Dianabol) budada iyo EQ). Qaadashada bariiska khamiirka cas waxay kaa caawin kartaa in koontaroolka iyo BP la ilaaliyo. Xaqiiqdii waa wax u baahan in lala socdo. Xaqiiqdiina waa sabab sababta aad u cuni lahayd NADIIF intaad wareega ku jirto - inaadan cunin pizza, burgers, iyo shiil.
Steroids-ka ayaa si intramuscular ahaan ah u qaadanaya. Ma jiro wax duudduub ah oo ku duuddubaya gacantaada ama wax alla wixii. Haddii aad isku muddo xidid ama xidid dhammaad waxaad u dhiman kartaa. Waxaa jira goobo cirbadeysan oo gaar ah- kuwa ugu ammaan badan suumanka, quads, glutes, iyo goobta ventro-gluteal. Dadku badanaa waxay u maleeyaan dameerka / glutes inay yihiin goobta ugu amniga badan, waan diidi lahaa maadaama ay adag tahay in la gaaro iyo sababta oo ah dareemaha nafsadda ayaa aad ugu dhow meeshaas haddii aad taas ku dhufato, nasiib wacan noloshaada oo dhan.
Steroids waa daroogo mucjiso ah mana aha. Waad ku fariisan kartaa sariir oo waxaad cuni kartaa baradhada oo waxaad u maleyneysaa inaad sii weynaatay, laakiin haddii taasi ay tahay waxa aad sameyn doontid markaad qaadanaysid, xitaa waa inaadan ku mashquulin inaad lacagtaada lumiso. Weli waa inaad shaqada qabataa. Weli waa inaan cunaa nadiif - waxaan dhihi lahaa xitaa nadiifiye. Weli waa inaad isha ku heysaa wax walba.
Hormoonnada pro-hoormoonka ah maahan bedel aamin ah oo loo yaqaan 'steroids' maadaama aad ka iibsan karto GNC / Nafaqada Buuxda / Meelkasta. Iyagu waa kuwo aad khatar u ah oo marar badanna ma iibsan kartid daawooyinka PCT-ga dhabta ah halkaas ka dibna waxaad u socotaa dhab ahaantii, dhab ahaantii dhabbaha qallafsan ee soo kabashada - haddii aad ka bogsato gabi ahaanba. Carruur badan ayaa ku dhammaatay TRT inta ka dhiman noloshooda tan darteed. Ma fahmin sida aan dacwad loogu soo oogin ka dib dacwad ka dhan ah dukaamadaan.
Miyuu MK-677 (Ibutamoren) si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Murqaha? Dib u eegista Sarmarka [CUSUB]	Tilmaamaha Iibsashada Dhamaystiran ee SARM SR9009 Jir-dhiska